Ihe a na -atụ anya nwere ngwa dị iche iche ma dọta uche ọtụtụ ndị nọ na ụlọ ọrụ. Maka ọtụtụ ụmụ amaala, echiche nke “ezubere iche” bụ ihe amabeghị, ụlọ ọrụ gụnyere sel fotovoltaic, ewepụghị panel ngosipụta, nnukwu sekit agbakwunyere, microelectronics, na mkpuchi e ji achọ mma niile chọrọ ọnụ ọgụgụ buru ibu “ihe mgbaru ọsọ.”.obodo m aghọọla otu n'ime obodo nwere nnukwu ihe achọrọ maka mgbasasị n'ụwa.
Agbanyeghị, rute ugbu a, elu-ịdị ọcha, elu-njupụta, nnukwu ebumnuche tungsten-titanium alloy lekwasịrị anya n'ụwa nwere ike mepụta na mba ole na ole dịka Japan, Germany, na United States. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ebumnuche ezubere iche nke ejiri na obodo m ka kwesịrị ibubata..
Foshan Jushitai Powder Metallurgy Co., Ltd., bụ nke mepụtara ngwa akụrụngwa ọdịnala, hụrụ ike ahịa a na obodo m na “adịghị ike” nke ndị ogbo ụlọ ya. Kemgbe 2006, ọ sonyeere ndị ụlọ ọrụ Shenyang Institute of Metal Research, Ụlọ akwụkwọ sayensị nke China, ma tinye ego karịa 2,000 RMB 10,000 maka nyocha na mmepe nke “ihe mgbaru ọsọ dị elu”.N'ime 2009, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara nke ọma tungsten-titanium alloy mkpuchi lekwasịrị anya na usoro nke enweghị atụ na-agbanwe agbanwe Njirimara., elu-njupụta, elu-adị ọcha tungsten-titanium alloy lekwasịrị ihe mepụtara na mepụtara ya bụ ụdị ọhụrụ nke ion sputtering mkpuchi ihe onwunwe, nke enwere ike iji ya n'ọtụtụ ebe na mgbochi mgbochi ma ọ bụ akwa agba nke ihuenyo ngosi, ihe eji achọ mma nke kọmputa akwụkwọ ndetu, na nkwakọ ngwaahịa batrị, wdg Ngwaahịa a agafela nyocha nke United States, na ihe nrụpụta nka na ụzụ ya erutela ihe achọrọ, na njupụta ebumnuche ezuola 99% nke njupụta usoro iwu ..9%, ịdị ọcha ruru 99.99%, njupụta ebumnobi eruola ọkwa ọkwa mba ụwa niile, nke ọma mejupụta oghere dị na mba m.
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Kọwaa ihe ọmụma nke ịsụ sputtering target medium frequency magnetron sputtering